ikhaya » imisebenzi » Web Design Design - NYC
Ukuvula uYobhi: IWeb Design Intern - NYC
indawo: Web Design Design - NYC
I-LeagueApps ekuzingeleni i-web design entsha kunye neetalente zangaphakathi. Isikhundla sinikezela ngamava amanqanaba onke aquka i-web, kunye neefoto kunye nemveliso yevidiyo kumaqela ahlukeneyo.
Abaqulunqi kwi-LeagueApps yinto ejabulisayo, kwaye sonke senza yonke into. Asiyena nje ukubeka uhlobo, ukukhetha imibala ye-hex, okanye ukunyusa amaphikseli kwi-Photoshop. Ukongeza kwi-design design, abaqulunqi be-LeagueApps baceba amava omsebenzisi kungekhona nje amaphepha okuthengisa kodwa onke amanqaku okuthintela, kunye ne-HTML kunye ne-CSS ukuyihlanganisa konke. Asicinga ukuba oku kukukwenza unicorn, okanye ninja, okanye rockstar. Siyicinga nje kukukwenza ube ngumyili wezakhiwo. Awunakho zonke ezo zakhono okwamanje, kodwa ukhangele indawo ozoyifunda nokuzihlaziya.
Imisebenzi yakho yemihla ngemihla ibandakanya ukuncedisa ekwakheni nasekwakha iwebsite yabaququzeleli bezemidlalo. Uya kuba nethuba lokusebenza kwiiprojekthi zangaphakathi kunye nokuvavanya - konke okuya kwenza umnikelo ophezulu kwiipotifoliyo yakho ekupheleni kwexesha lakho apha.
Unokuhlala eMntla VA okanye kwi-NYC, kwaye kulungile. Sifuna ukwazi ukuba wenze olu hlobo lomsebenzi kwaye ufuna ukuqhubeka nokwandisa izakhono zakho. Unalo uthando lokuyila, indawo ephothileyo yobungcali, kunye nokuthakazelisa ngeteknoloji. Siyathemba ukuba unakho ukuziqhelanisa okuza kusenza sikuthande ngakumbi.
Umdlali weqela esiwufunayo:
Uyazi i-Adobe Creative Suite njengemuva yesandla sabo
Unokuzomeleza usebenzisa izixhobo ezahlukeneyo zoyilo njengeSketch
Unamava nge HTML / CSS
Jabulela ukusebenzisana nokuthetha ngokufanelekileyo nabanye abaklami, abaphuhlisi kunye nabanikazi bemveliso ukudala ii-WordPress ezintle, ezinembile
Zinxibelelwano ezintle kunye nezakhono zokusebenzisana eziza kubakhokelela ekuxoxeni, kwaye ekugqibeleni iprojekthi, phambili
Uthando lwefayile yefowuni kunye nomzobo oqulunqayo othe wuthengisa izimvo zakho
Kule nxaxheba, uxanduva lwakho lubandakanya:
Ncedisa ekwakhiweni kwewebhusayithi ye-WordPress usebenzisa izixhobo ezifana neSketch, Photoshop, Illustrator okanye emva kwemiphumo.
Ncedisa ekwakheni / ekubhaliseni iimxholo ze-WordPress kwimibutho yezemidlalo
Ukuyila kunye nekhowudi ye HTML / CSS amakhasi e-static landing
Sebenza kunye neqela lokuqalisa ekusebenziseni isayithi lomlingani ukufanisa nokuzisa kwi-LeagueApps Platform.
Ukubambisana nabanye abenzi, abayingcali kunye nabanikazi bemveliso kwenkqubo yokumaketha kunye nemveliso
Ulungele ukufaka isicelo?
Kwi-LeagueApps, sinembali emide yokubonga abaviwa abafaka umgudu ongakumbi kwizicelo zabo. Ingaba yiyo ividiyo ozazisa yona okanye usenza i-website yangokwezifiso-konke oko kuwe. Sifuna ukwazi ukuba ufanelekile, ulungele kakuhle, kwaye kubaluleke kakhulu, ufuna le msebenzi kungekhona nje nawuphi na umsebenzi.
Xa usulungele, thumela i-imeyli kum kuludwe [e] Leagueapps.com Kunye nepottoliyo yakho yokwakha kunye nantoni na eyongezelelweyo ongathanda ukuyithumela ngayo. Ndiza kubelana nezicelo zabanye neqela. Xa sithintela uluhlu lwethu lwabaviwa, siya kufikelela kuwe.
Ukuba oku kuzwakala ngathi, ndikukhuthaza ukuba ufake isicelo. Ukuba oku kunguye wena kwaye uzwakala njengomntu owaziyo, nceda udlulisele igama nathi!
Previous: Umgangatho wokusasazwa: Kuthetha ukuthini ukuThunyelwa koNxibelelwano olungabonakaliyo
next: I-GTC idlulisela i-Award ye-Television ye-Cameraman's Award (TiCA), ukuba ibonelelwe kwiMinikelo yeeGTC zamalungu kunye nabamenywe
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "Web Design Design - NYC". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/web-design-intern-nyc-2/. Enkosi.